အကူအညီလိုတယ်? ထိတှေ့ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု
နေအိမ်/2018/Gift wrap idea/Craft Ideas with Ribbon Shredder – How to Make Ribbon Flowers – Craft Projects
Hi everyone! I want to share with you these awesome ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး ကျွန်မအပေါ်တွေ့ရှိရကြောင်း www.ribbon-shredder.com They’re so easy to use and they definitely make my presents stand out from the rest! ကအားလပ်ရက်င်ရှိမရှိ, နျစ်ပတ်လည်နေ့, မှေးနေ့, သို့မဟုတ်အထူးအခမ်းအနား, ဤအဖဲကြိုးခုတ်နေတဲ့အသက်တာကိုချွေတာဖြစ်ကြောင်း!
ငါတယ်4အလွယ်တကူဖျက်စီးကြပြီးအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားထွက်လာသည်ဟုကွဲပြားခြားနားသောခုတ်! တစ်ခုချင်းစီကိုလက်ကိုင်ဖျက်ဆီးလုံခြုံစွာသင့်ရဲ့ဖဲကြိုးဖြတ်ကြောင်း mini ကိုဓါးသွားနှင့်တကွကြွလာ. သင့်ရဲ့လက်ချောင်းပျက်ဆီးလမ်းမှကာကွယ်ပေးကြသည်နှင့်သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အပေါငျးတို့သချကိုင်ထားစဉ်တစျခုအဆုံး၌ချော်နှင့်အခြားဘက်ခြမ်းဖို့ဖဲကြိုးဆွဲထုတ်ဖြစ်ပါသည် ဖဲကြိုးခုတ်.
သင်သည်လည်းအကူအညီလိုလျှင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်နောက်ကျောအပေါ်ညွှန်ကြားချက်များ. သင်တို့သည်ဤအတူကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များဖန်တီးနိုင်ကမှာအားလုံးအများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုမယူပါဘူး! သင်တစ်ဦးအထုပ်သို့မဟုတ်အိတ်မှပူးတွဲနိုငျကွောငျးကိုပိုမိုအနုစိတ်ဒီဇိုင်းအဘို့မိမိတို့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိအခြားသင်ခန်းစာဗီဒီယိုများထုတ်စစ်ဆေး!
ငါသူတို့လည်းတတ်နိုင်ရဲ့အရည်အသွေးဖဲကြိုးပစ္စည်းရောင်းစားသောကိုချစ်! တစျဖနျ, check them out by going to ribbon-shredder.com and let me know what you think! Thanks for watching!
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ for more details.
အားဖြင့် ချားလ်စ်က Wong|January 11th, 2018|Gift wrap idea|ဟာ Off comments အပေါ် Craft Ideas with Ribbon Shredder – How to Make Ribbon Flowers – Craft Projects
Poly Ribbon & လေးတို့သည်စက်ရုံ
ဖဲကြိုးဖျက်စီး tool ကိုကဘာလဲ?
ဒီဇင်ဘာလ 17, 2016
ဖဲကြိုး Shredder နှင့် Curler Tool ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို?
Ribbon လမျးဖွောငျ့ Make လုပ်နည်း & ဖဲကြိုး Shredder နှင့် Curler နှင့်အတူဆံပင်ကောက်ကောက်?
6 ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးပြီးအတွက် Must-ရှိသည် Tools များနှင့်ပစ္စည်းများ 2019
ဇန်နဝါရီလ 2nd, 2019
"" "အသုံးပြုရလွယ်ကူ" ဖဲကြိုး Shredder
နိုဝင်ဘာလ 1st, 2018
ဇွန်လ 25, 2018
အဆိုပါ RSPAC သတင်းလွှာ
အထူးအခါသမယများအတွက်လှပသောလေးကိုဖန်တီးရန်စိတ်ကူးများ Get. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာမှ Subscribe.
Holdsun စက်မှု Co. , Ltd မှ.
ကန်စက်မှုဇုန်, လီဝူးကျေးရွာ, Qiaotou မြို့, Dongguan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ
ph: +86 769 8252 1007 | အီးမေးလ်ပို့ရန်: [email protected]
မူပိုင် 2020 RSPAC ™ (လက်ဆောင်ပေးမယ် Pack များအတွက်ဖဲကြိုး Shredder) | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး | : D & C ကအားဖြင့် Powered